Soosaarista daabacaadda midabaynta ee loogu talagalay dadka waaweyn Shiinaha iyo Soo-saare Buugga ' Daabacaadda Aqoonta
Magaca badeecada: daabacaadda buugga daabacaadda midabaynta guud ee dadka waaweyn
Shayga: warqad isku-xidhan, warqad-daabacan iyo / ama boodhka cawlan
Dhamaadka dusha sare: xeraynta matte
Qiimaha qeybta: usd2-usd20
MOQ: 500 nuqul oo ah nidaamka caadooyinka
1) Buugaag horay loo heli karo
Waxaad heli doontaa dhammaan buugaagta aad dalbato kahor, halkii aad kaheli lahayd habka qiimeynta dalabka ah, kaas oo buugaagta aan lagu daabicin illaa laga iibinayo. Marka, taasi micnaheedu waa inaad haysan kartaa nuqulo ka mid ah buugaagtan oo laga iibinayo iibsadaha aan hubin.
1) Maalgalin horleh ayaa iibisa kahor maalgashiga
Marka la isticmaalayo buugaagta daabacan ee gaagaaban, qorayaashu waa inay amraan buugaagta kahor intaan la iibin. Taas macnaheedu waa haddii uusan buugga iibin, iibsashada bilowgu waxay noqon kartaa mas'uuliyad.
2) Samee doorashada ugu fiican
Buugaagta daabacan ee muddada-gaaban ayaa inta badan u isticmaala qorayaasha markii ugu horreysay iyo ururo yaryar oo leh aqris xaddidan. Waxa kale oo ay u fiican tahay nuqullada akhriska hore iyo daabacadaha xaddidan. Qaabkani wuxuu bixiyaa ikhtiyaar yar oo halista ah, oo u oggolaanaya buugaagta iyada oo aan wax badan soo socda la daabicin oo ay adeegsadaan qoraayaal badan oo kala duwan.
Mareykanka, Mareykanka, Kanada, Mexico, Australia, Yurub, Koonfur Bari Aasiya, Ruushka, Japan, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfurta Ameerika, iwm.
Fadlan la soco inaanaan iibin buugaagta dhammeystiran iyo wixii agab ah. Waxaan bixinaa adeegyo ballan-qaadis oo waxaan u baahanahay faylalka loo yaqaan 'vector PDF files' si aan u daabacno. Si loo bixiyo qiime sax ah, waxaan u baahan nahay inaan ogaano cabirkaaga buugga, tirada bogagga gudaha, midabka daboolka iyo gudaha, iwm.
Cabbirrada aan inta badan daabacno waa 8.5 * 11inch, 8.5 * 5.5inch, 8.5 * 8.5inch, 8 * 8inch, 7 * 7inch, 6 * 9inch, iwm.
Haddii daabacaadda buugga muddada-gaaban ay u egtahay ikhtiyaar wanaagsan, ama haddii aadan hubin dariiqa loo maro, ha ka waaban inaad la xiriirto Ball Media Group. Shirkaddayadu waxay khibrad ballaaran u leedahay daabacaadda buugga, iyo sidoo kale tiro kale oo adeegyo kale oo warbaahineed ah sida soo saarista fiidiyowga iyo horumarinta shabakadda.
Waxaan khabiir ku noqonay habka ugu waxtarka badan ee lagu soo saaro buugaagta iyada oo loo adeegsanayo daabacaadda muddada gaaban waxaanan ku faraxsanaan doonnaa in aan kaa caawinno tallaabo kasta oo aad hadda ku jirtid hawsha. Nala soo xiriir maanta!
Hore: Sanduuqa Baakadaha Dharka Qaadista Dharka
Xiga: Daabacaadda Midabaynta ee Buugga (Booking Printing Book) Si Loogu Nasto Dadka Waaweyn